Wararka - Alaabtayadu waa badbaadada xidhiidhka cuntada
(Sharaxaad kooban) Alaabtayagu waa badbaadada xidhiidhka cuntada. Tuoda Firmly waxay raacdaa nidaamka ISO9001&ISO14001. Had iyo jeerna samee tababar xiriir la leh shaqaalaheena. Si loo hubiyo in habka wax soo saarka our si waafaqsan heerka tayada sare leh. Intaa waxaa dheer, waxaan khibrad u leenahay kooxaha naqshadeynta iyo injineernimada iyo tas-hiilaadka wax soo saarka ee horumarsan. Markaa waxaan hubin karnaa badeecadayada kama dambaysta ah si aan u buuxinno shuruudaha macaamiisha kala duwan.